बिदामा आफ्ना बालबच्चासँग कसो गर्दा असल अभिभावक बन्न सकिन्छ ? - यादका टुक्रा
तपाईको बच्चाको दैनिक तालिका हेर्नुहोस् त । बिहान ६-७ बजे उठ्छन् । उठ्नसाथ विद्यालयको लागि तयार हुनुपर्छ । हतार-हतार खाजा खायो, दिसा-पिसाब गर्‍यो, युनिर्फम लगायो, कापी-किताब मिलायो । र, बिद्यालयतर्फ दौडियो । बिहान ८-९ बजे विद्यालय गएका बालबच्चा साँझ ४-५ बजे घर आइपुग्छन् । घर आउनसाथ युनिर्फम बदल्ने, हातखुट्टा धुने, नास्ता खाने । त्यसपछि होमवर्क ।
एक छिन टिभी हेर्दा-हेर्दै सुत्ने बेला हुन्छ । अर्थात अहिलेका शैक्षिक-तालिका अनुसार बच्चाहरुलाई खेल्ने समय अत्यान्तै कम छ । तपाईलाई लाग्न सक्छ, विद्यालयमा पुगेपछि त्यही खेलिहाल्छ नि । हो, विद्यालयले पढाइका अतिरित्त खेलकुदमा पनि विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँछन् । निश्चित समय विद्यार्थीलाई खेल्न, कुद्न छाडिन्छ । तर, विद्यालयको सीमा र समयभित्र खेलिने खेलले बालबच्चाको सर्वाङ्गीण बिकासमा सघाउ पुर्‍याउँछ भन्ने छैन । किनभने बच्चालाई बच्चा जस्तै हुन दिनुपर्छ । उनीहरुले स्वतन्त्र ढंगले खेल्नु, कुद्न पाउनुपर्छ । यस्तो वातावरण उनीहरुले विद्यालयमा भन्दा बढी घरमा पाउन सक्छन् ।
बच्चालाई बच्चाजस्तै हुन दिनुपर्छ – अधिकांश अभिभावकले बच्चाको पढ्ने, खाने, उठ्ने तालिका निर्धारण गरिदिन्छन् । तर, बच्चाको समुचित मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि यति मात्र पर्याप्त छैन । उनीहरुलाई बालशुलभ ढंगले खेल्न, रमाउन दिनुपर्छ । अर्थात बच्चालाई बच्चा जस्तै हुन दिनुपर्छ । वा, त्यस किसिमको वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । बच्चाका लागि पढ्ने, खाने, सुत्ने तालिकासँगै खेल्ने तालिका पनि निर्धारण गरिदिनुपर्छ । हरेक दिन उनीहरुले खेल्नका लागि समय पाउनुपर्छ । संभव भएसम्म बाहिरी खेलकुदमा प्रेरित गर्नुपर्छ । घरभित्रै भएपनि शारीरिक खेलकुदमा जोड दिनुपर्छ । हुन त हरेकजसो खेलले मानसिक वा शारीरिक विकासमा सघाउ पुर्‍याएकै हुन्छ । साथसाथै मनोरञ्जन पनि दिलाएको हुन्छ । खासमा बच्चाहरुलाई उन्मुक्त रमाउन दिनुपर्छ । भनौं, मनोरञ्जन गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।
बच्चाको साथी बनौं – अहिले धेरैले घरमा एक्लो बच्चा हुर्कारहेका छन् । कुनैबेला एक सन्तानलाई बरदान ठानिन्थ्यो । यो अभिभावकको कोणबाट हेरिने कुरा हो । एउटा मात्र बच्चालाई लालनपालन र हेरचाह गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने धारणले एकल सन्तानमा प्रेरित गरियो । तर, अहिले एकल सन्तान समस्या बनेको छ ।
किनभने एक्लो बच्चा हुँदा अभिभावकलाई सहज त हुन्छ तर बच्चा वास्तवमै एक्लिन्छन् । उनीहरुसँग खेल्ने साथी हुँदैनन् । यस्तो अवस्था धेरैजसो घरभित्र देख्न सकिन्छ ।
अब के गर्ने त ? – यसको समाधान हो, आमाबुबा स्वंयम् बच्चाका लागि साथी बन्नुपर्छ । जब बच्चा खेल्न थाल्छन्, आफुपनि उनीहरुसँगै खेल्नुपर्छ । यस्तै प्रसंगमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अभिनेत्री संचिता लुइटेलले भनेकी थिइन्, ‘म आफ्ना छोराछोरीसँगै कार्टुन हेर्छु । चकलेट खान्छु । खेल्छु ।’ आफ्ना बच्चालाई बर्थ डे मनाउन वा बर्थ डे केक काट्न रमाइलो लाग्ने भएकाले उनी आफन्तका बालबच्चाको जन्मदिनमा समेत छोराछोरीलाई लिएर ‘सेलिब्रेट’ गर्न पुग्छिन् । ‘म आफै केक बोकेर अरु बच्चाको बर्थ डे मनाइदिन पुग्छु’ उनले भनेकी थिइन् । अभिनेत्री लुईटेलले भनेजस्तै हामीले बच्चाको खुसी एवं रमाइलोका लागि बच्चा जस्तै हुन सिक्नुपर्छ ।
शनिवार विशेष बच्चाका लागि – खासगरी कामकाजी दम्पतीले शनिवार रमाइलो गर्ने योजना तय गर्छन् । उनीहरु साथीभाई निम्त्याएर वा साथीभाइकहाँ गएर मिठो मसिनो खान्छन्, तास खेल्छन् । यस्तो प्रवृत्ति धेरैतिर देखिन्छ । उनीहरुले यो सोच्दैनन् कि, आजको दिन आफ्ना बच्चालाई पनि समय दिनुपर्छ । बच्चालाई नुहाइधुवाइ गरिदिनेबाहेक अधिकांश अभिभावक उनीहरुसँग खेल्ने, रमाउने गर्दैनन् । तर, हप्तामा एक पटक बच्चाका लागि समय दिन सकिन्छ । कम्तिमा शनिवारको दिन बच्चासँग खेल्ने, रमाउने गर्न सकिन्छ । यसदिन बच्चालाई किताव र पढाइको तनावबाट मुक्त गराएर उन्मुक्त रमाउन दिनुपर्छ ।
Don't Miss it बच्चा पेटमा भएदेखि बच्चाको विकाशमा आमाबुबाले गर्नु पर्ने कामहरु के के हुन् ?
Up Next व्रतमा के फाइदा छन् जसलाई विज्ञानले पनि नर्कान सक्दैन ?
के कुराहरु घरमा याद नगरेमा बच्चाहरु निश्चितरुपमा रोगी बन्छन् ?
विगतमा बालबच्चाहरु कुपोषित हुन्थे । उनीहरुले भरपेट खानै पाउँदैनथे । तर, अहिले परिस्थिति ठीक विपरित छ । बच्चाहरुले आवश्यक्ताभन्दा बढी…
बालबच्चामा परिवर्तन कस्ता परिवर्तन भए भने बाबुआमाले आफ्नो अधिकार देखाउनु हुदैन ?
घरको रासनदेखि कार्यालयको तनावसम्म घरका सबै जिम्मेवारी घरका ज्येष्ठ सदस्यहरू उठाउँछन् । बच्चाको साना आवश्यकता होस् या परिवारको जिम्मेवारी नै…
कुन २५ बानीहरु आफ्ना छोराछोरीलाई नसिकाउनेहरु असल अभिभावक हुदैनन् ?
तपाईको बालबालिकामा छुच्चो बानी बिकास भइरहेको हुन सक्छ र बालबालिकाहरूले यो कुरा महसुस नै गरेका हुँदैनन् । जस्तै कसैलाई बोल्दाबोल्दै…
5 months ago 904 Views
पढ्न नजान्ने वा झुक्किने बच्चाबच्ची छन् भने अल्छि मात्रै हुन् त ? कि अर्को कुरा पनि छ ?
अक्सर बच्चाहरु पढ्ने, लेख्ने कुरामा त्यती खुसी हुँदैनन् । पढ्नु वा लेख्नु भनेको अभिभावकका लागि हो, शिक्षकको लागि हो भन्ने…
5 months ago 686 Views
गलत संगतले बिग्रिन नदिन छोराछोरीका कस्ता कुरा बाबुआमाले हेक्का राख्नु पर्छ ?
बालबालिकाहरूले हरेक समय केही न केही सिकिरहेकै हुन्छन् । जब उनीहरू साना हुन्छन्, मातापिता तथा परिवारका सदस्यबाट विभिन्न कुरा सिक्ने…
यी ७ कुरा गरे पछि बच्चाको कपाल घरैमा चिटिक्क पार्न सकिन्छ
बच्चाको कपाल धेरै कोमल हुने भएकाले नियमित रुपमा हेरचाह गर्नुपर्छ । बच्चा आफैले आफ्नो कपाल स्याहर गर्न सक्दैन । त्यसैले…
किशोरावश्थामा हुने परिवर्तनलाई कसरी आत्मसात गर्ने ?
कुनै पनि मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण भनेको उनीहरूको किशोरावस्था हो । सामान्यतया किशोरावस्था १३ वर्षदेखि १९ वर्षसम्म रहने गर्छ…
व्बाइफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डसँगै बस्दा फस्न सकिने कुरा यस्ता यस्ता
नेपाली परिवेशमा पनि अहिले लिभ इन रिलेसन सामन्य बन्दै गएको छ । केटा र केटी आपसी सहमतीमा, बिवाह नगरी पती-पत्नी…
1 year ago 4641 Views